Kristal na-agwọ ọrịa na-arụ ọrụ n'ezie? Nnukwu mmelite ọhụrụ 2021
Ọ bụrụ n’ịbanye n’ụwa iji gwọọ ọgwụ ọzọ, ikekwe ị nụla gbasara kristal. Aha e nyere ụfọdụ mineral, dị ka quartz, ma ọ bụ amba. Ndị mmadụ kwenyere na njirimara ahụike bara uru.
Zụta nkume dị egwu na ụlọ ahịa anyị
Ijide kristal ma ọ bụ ịtụkwasị ya n'ahụ gị na-eche ịkwalite ọgwụgwọ anụ ahụ, nke mmụọ na nke mmụọ. A na-ekwu na kristal na-eme nke a site na iji mmekọrịta gị na ahụ ike gị, ma ọ bụ chakra na-emekọrịta ihe. Ọ bụ ezie na ụfọdụ kristal na-agwọ ọrịa kwesịrị iwepụ nchekasị, ndị ọzọ na-ekwu na ha na-eme ka itinye uche ma ọ bụ okike dịkwuo mma.
N'anya onye na-ahụ ihe
Njirimara ahụike nke ihe omimi nke kristal na-agwọ ọrịa
Nyocha ndị dọkịta
N’ụzọ a na-atụghị anya ya, ndị nchọpụta emeela ọmụmụ ole na ole na kristal. Ma otu, nke e duziri laa azụ na 2001, kwubiri na ike nke mineral ndị a “dị n'anya onye na-ahụ ya.”
Na European Congress of Psychology in Rome, ndị mmadụ 80 jupụtara akwụkwọ ntinye akwụkwọ iji tụlee ọkwa ha kweere na ihe dị ịtụnanya. Ka oge na-aga, otu ìgwè ahụ na-amụ ihe gwara onye ọ bụla ka ọ na-atụgharị uche maka minit ise. Na-ejide ma ọ bụ ezigbo quartz kristal ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya crystal mere nke iko.
Mgbe nke a gasịrị, ndị sonyere zara ajụjụ banyere mmetụta ha nwere mgbe ha na-atụgharị uche na kristal ndị na-agwọ ọrịa. Ma kristal ndị ahụ na nke adịgboroja mepụtara mmetụta yiri nke ahụ. Ndị mmadụ nwalere elu na ajụjụ a na-ekwenye ekwenye na-enwe mmetụta dị ukwuu karịa ndị na-akwa emo na paranormal.
Anyị chọpụtara na ọtụtụ ndị na-ekwu na ha nwere ike ịnwe mmetụta na-enweghị isi. Mgbe ị na-ejide kristal, dịka nsị, okpomọkụ na ịma jijiji. Ọ bụrụ na anyị eburu ụzọ gwa ha na nke a bụ ihe nwere ike ime, ”ka Christopher French, prọfesọ nke akparamàgwà mmadụ na Goldsmiths, Mahadum London, na-ekwu. "N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nsonaazụ ndị a rụpụtara sitere na ike ịtụ aro, ọ bụghị ike kristal."
Ọtụtụ nnyocha na-egosi otú ike placebo nwere ike isi sie ike. Ọ bụrụ na ndị mmadụ kwenyere na ọgwụgwọ ga-eme ka ahụ dị ha mma. Ọtụtụ n’ime ha na-adị mma mgbe a gwọchara ha. Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara na ọ baghị uru na ọgwụgwọ.
Ihe ọ na-ewe bụ nke ị ga-atụ anya n'aka onye sayensị. Ee ee, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ eziokwu ịsị na kristal enweghị onwe ha nke akụrụngwa ahụike nke ndị ọrụ nyere ha.
Mana uche mmadụ bụ ihe dị ike, ọ dịkwa aghụghọ iji kwuo hoo haa na kristal anaghị arụ ọrụ, ọ bụrụ na ị kọwaa “ọrụ” dị ka ịnye ụfọdụ uru.
Ted Kaptchuk, prọfesọ na nkà mmụta ọgwụ na Harvard Medical School kwuru, sị: "Echere m na echiche ọha na eze na ahụ ike banyere placebo bụ ihe adịgboroja ma ọ bụ aghụghọ. Mana nyocha Kaptchuk na placebo na-egosi na usoro ọgwụgwọ ya nwere ike ịbụ "ezigbo" na "siri ike". Ọ bụ ezie na ọ mụtaghị kristal, ọ gaghị ekwu okwu banyere izi ezi ha ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara ọgwụ ọzọ. Kaptchuk edeela na enwere ike ịtụle mmetụta ọgwụgwọ e wuru na placebo dị ka akụkụ dị iche iche nke nrụpụta ọrụ ya, yana uru uru ahụ a na-ebute ebebo kwesịrị ịkwalite, ọ bụghị ịhapụ ya.
Ọtụtụ ndị dọkịta kwenyere na ike nke placebo. Nnyocha BMJ nke 2008 chọpụtara na ihe dịka ọkara nke ndị dọkịta nyochara kọrọ na iji ọgwụgwọ ebebo iji nyere ndị ọrịa aka. Dị ka ọ na-adị, dọkịta na-atụ aro ka a na-ebelata ihe mgbu ma ọ bụ mgbakwunye vitamin. Ọ bụ ezie na egosighi onye ọ bụla maka mgbaàmà onye ọrịa ahụ. Ọtụtụ lere omume nke ịkọwa ọgwụgwọ ọgwụgwọ ebe a na-anabata ya, ndị edemede kwubiri.
N'ezie, ijide kristal na-agwọ ọrịa adịghị ka ilo ihe Ọjọọ. Atụla anya na dọkịta gị ga-akwado kristal ka ọbịbịa gị ọzọ. Site na onodu ogugu ogwu na ihe omumu nke sayensi, nyocha di ugbua na-egosi na ha bu mmanu agwọ. Mana nyocha banyere mmetụta placebo na-egosi na ọbụlagodi mmanụ agwọ nwere ike ịba uru maka ndị kwere… gụkwuo >>
anyị gemstones nchịkọtaụlọ ahịa anyị